Wax ka qabashada warshadda biyaha diiran ee saboolka ah ee la keenay Yenikapı oo loogu talagalay Marmaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulJawaab ka imanaysa ururrada deegaanka si loo helo warshad korontada kulul ee loo yaqaan "Newkapı" ee Marmaray
29 / 05 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY
Jawaab celin ka timid ururrada deegaanka ee warshadda biyaha kulul ee saboolka ah ee la keenay Yenikapı oo loogu talagalay Marmaray: Wakiilo ka socda ururada deegaanka iyo khubaro ka hadlaysa “warshad tamarta dul sabaynaysa” oo lagu daadgureeyay xeebaha Yenikapı toddobaadyadii la soo dhaafay si ay koronto u siiso Marmaray; wasakhda ayaa sii kordheysa, ayuu yiri. Ahmet Soysal, oo ah khabiir caafimaadka bulshada ah, ayaa ku dooday baahida loo qabo markabkan, oo loo adeegsado xaaladaha dhulgariirrada iyo masiibooyinka dabiiciga ah, inay la xiriiraan siyaasadaha tamarta beenta ah.
Warshadda tamarta kululeynta leh ee Bey floating "Doğan Bey, oo sidoo kale loo yaqaan powership, oo ay leedahay shirkadda Karadeniz Holding, ayaa dhawaan la keenay Marmara si ay koronto ugu siiso Marmaray. Markabka, oo hore loogu diray inuu koronto siiyo aagagga dagaalka sida Ciraaq iyo waddammada ay kaabayaashoodu tamartu burburayaan, ayaa shaqaalaysiisay Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga.
Muddo intee le'eg ayaa la isticmaali doonaa, shidaal noocee ah ayaa la adeegsan doonaa iyo sida bay'adda looga tegi doonaa su'aalaha aan laga jawaabin sida saamaynta markab uu dhowaan ku soo diray CHP Istanbul ku xigeenka Dr. Ali Şeker wuxuu codsi siiyay Golaha Qaranka ee Turkiga.
Iyl Markabkan, dhirta tamarta kuleylka ayaa loo wareejiyay Istanbul ”
In kasta oo su'aalahani aan wali laga jawaabin, ururada deegaanka iyo khubarada ayaa dareenka u soo jeediya waji kale.
“Waxaa ku soo badanaya dhirta korantada kuleylka ee Marmara. Intooda badan waxay ku urursanaayeen baadiyaha waana laga fogeeyay magaalada, laakiin hadda waxay ku sameeyaan bartamaha magaalada. B
Theynce Waxay sameeyeen tan Çatalca marka hore, ka dibna waxay sameyn doonaan mashruuc si toos ah saameyn ugu yeelan doona magaalada Istanbul ee Küçükçekmece. Waxay si sax ah u dhigeen qeybta hoose ee Istanbul. ”
Sida laga soo xigtay Deniz, mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee loogu baahan yahay markabkan ayaa ah OS tusaale fiican oo ku saabsan horumarka waalan ee Marmara iyo deegaanka dabiiciga ah ee Istanbul.
“Istanbul waxay saameyn xun ku yeelan doontaa kordhinta wasaqda hawada iyo isbedelka cimilada”
Mehmet Baki Deniz wuxuu ogyahay in mashruucyada mega ay culeys weyn saaraan Istanbul, Mehmet Baki Deniz wuxuu sheegayaa in xitaa Marmaray oo ah mashruuc gaadiid, ay hadda kusoo laabaneyso Istanbul oo ay ka dhigan tahay cillad xagga deegaanka iyo dhibaato ah. Sida laga soo xigtay Deniz, dhirta korantada kuleylka ayaa hadda loo rari doonaa Istanbul markabkan.
In kasta oo aysan jirin xog rasmi ah oo ku saabsan shidaalka markabka uu ku shaqeynayo, haddana Deniz wuxuu sheeganayaa in shidaalka lagu dari karo wasaqda hawada ee hadda jirta ee Istanbul, isagoo sheeganaya in markabku uu ku shaqeynayo shidaal-shidaal, iyo in markabku saameyn xun ku yeelan doono kordhinta wasakhowga hawada iyo isbedelka cimilada.
Sida laga soo xigtay Soysal, markabku wuxuu la shaqeeyaa gaaska dabiiciga ah
Khabiirka Caafimaadka Dadweynaha Ahmet Soysal wuxuu cadeeyay in markabku uu la shaqeynayo gaaska dabiiciga ah: “Saamaynta deegaanka ee sii kordheysa ee warshada gaaska dabiiciga ah waxay leedahay saameyn badan ayey leedahay, Soy Soysal wuxuu yiri isagoo aan laheyn qibrad u leh qiimaha markabkaan ku leeyahay caafimaadka aadanaha ee aduunka.
Sida laga soo xigtay Bulshada “maraakiibta noocan ah waxaa loogu talagalay inay bixiyaan xalal ku meelgaar ah oo loogu talagalay musiibada, aagagga dagaalka, iyo tamarta, aag yaraanta tamarta. Tusaale ahaan, waxay ka shaqeeyeen Ciraaq. ”
Markabkan waxaa loo adeegsaday meelaha kaabayaasha tamarta ay ku waxyeelloobeen xaaladaha sida dagaal dhulgariir. ”
Soysal wuxuu yiri baahida loo qabo maraakiibtaani waxay ahayd mid loogu baahnaa meelaha masiibada dabiiciga ah ama aag dagaal halkaas oo kaabayaashii tamarta ay ku burbureen, iyo adeegsiga markabkan loogu talagalay Marmaray waxaa lagu sharixi karaa khaladka siyaasadaha tamarta. Soysal wuxuu sii waday:
Enerji Waxaa ka jira hoos u dhac dhanka tamarta ah magaaladaada ugu weyn ee aad u isticmaasho markabkan. Waxaad isticmaashaa tamar dib loo cusbooneysiin karo. Waxaad leedahay siyaasad tamar, awood rakiban iyo quwad koronto. Awoodda aad ku rakibtay waxay ka kooban tahay ilaha tamar aasaasiga ah ee isku dheellitiran midba midka kale. Mid ka mid ah yaraanta ayaa daboolay tan kale. Waxaad leedahay siyaasad tamar iyo saadaalin ah. Waxaad sameysay qorshe aad kula kulanto. Laakiin haddii ay jirto hoos u dhac xagga tamarta ah magaaladaada ugu weyn, waxay la macno tahay in horay qorshihii ugu horreeyay oo aan horay loosoo qaban.
Nidaamka Xuquuqda Hawada ee Nadaafadda: Maraakiibta ayaa noqon doonta il cusub oo hawada sii daaya
Temiz Istanbul waxay noqotay magaalo isu bedeshay sidii ay u noqon lahayd sidii la rabay oo la taaban karo iyadoo ay ugu wacan tahay ciribtirka dadka iyo siyaasadaha magaalooyinka, waxayna haysataa dhibaatooyin wasakhaysan oo hawada ku saabsan Temiz oo ay ku sheegtay bayaankeeda wargeysyada cagaaran. iyo burburka degdega ah ee daboolka cagaaran iyo kaymaha, oo door muhiim ah ka ciyaara ka qaadista wasakhowga hawada, sidoo kale waa basbaaska milixda.
Platform, Doğan Bey markab si Marmara loo keenay dareenka kororka wasakhowga hawada ayaa ka dhici doona bayaanka lagu yiri:
Jeneratör In kasta oo aysan jirin wax sharraxaad ah oo ka imanaya dekedaha la oggolaaday ee ku saabsan markabka, haddana waxaa iska cad in markabkani yahay isha cusub ee hawada sii daaya, ha ahaato mid cuna shidaalka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Sidan, il kale oo muhiim ah oo wasakhooyinka ah ayaa lagu dari doonaa wasakhowga hawada ee jira iyo heerka wasakheynta ayaa la labanlaabmi doonaa.
Hava Sida la ogsoon yahay, wasaqowga hawada waxaa loo tixgeliyaa ilaha ugu muhiimsan ee kansarka sababa ee Ururka Caafimaadka Adduunka. Ka sokow kansarka, wasakhowga hawada ayaa sidoo kale sababa dhibaatooyin caafimaad oo badan, gaar ahaan dhibaatooyinka wadnaha iyo wareegga dhiigga. Xogta la hayo ayaa muujineysa in dadka 32.500 ay sanad walba ku dhintaan waddankeenna wasakhowga hawada. ”
Temiz Istanbul waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan magaalooyinka dünya sida lagu sheegay qoraalkeeda waxayna wadaagaan xogta soo socota:
"Daraasadihii hore ee lagu sameeyay qalabkeenna (THHP) oo ku saleysan xogta Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta, waxaa la muujiyay in celceliska sannadlaha ah ee waxqabadka qayb ka mid ah gobolka Istanbul uu ahaa 2015 microgram / m53 ee 3, halka celceliskan uu ku kordhay 2016 microgram / m³ ee 65. Labada heerarba aad ayey uga sarreeyaan xadka loo aqbali karo ee Ururka Caafimaadka Adduunka (20 microgram / m³). Magaalada Istanbul, gaadiidka magaalada, kuleylka guriga, wasakhowga hawada oo ay sababaan qiiqa warshadaha iyo dhawaanahan sii kordhayaan howlaha qodista iyo qodista ayaa ah sababaha ugu muhiimsan ee wasakhowga hawada. Marka laga reebo halistaas, wasakhda ay keento taraafikada badda ayaa ah qatar muhiim u ah Istanbul. Wasakhowga qiiqa qiiqa waa mid aad u sarreeya oo aan lala barbar dhigi karin taraafikada gawaarida.
Codsiga ah in si deg deg ah loo joojiyo warshada tamarta ayaa laga codsaday bayaanka. Waxaan dooneynaa in warshada korantada si deg deg ah kor loogu qaado ”.
Dadka Samsun waxay la dirireen warshad tamarta kuleylka
Samsun, oo ah halka ay ka shaqeyso warshad tamarta kuleylka dabeysha ah oo laga shaqeynayay, taasoo ka dhalatay halganka, dadku waxay ku guuleysteen sannadihii 2003 iyo 2008 waxayna ka hortageen isticmaalka warshad korantada gacanta.
2001, warshadda awoodda guurguura ee Cengiz Enerji iyo Aksa waxay rabeen inay aasaasaan jawaab celin adag oo ka timid shirkadda Tekkeköy iyo ururada dimoqraadiga ah ee waxyeelaynaya deegaanka iyo caafimaadka aadanaha, iyo Ururka 'Samsun Bar Association' oo kiiskii ugu horreeyay u furay Maxkamadda Maamulka ee 11 Maarso 2002. Maxakamadda Maamulka ee Samsun waxay sheegtey in aan loo fasaxin kiiska, oo ay soo gudbiyeen Ankara 10. Waxaa loo diray maxkamada maamulka, Ankara 10. Maxakamadda Maamulka ayaa sidoo kale joojisay hawlgalkii dhirta korontada guur guura markay ahayd Febraayo 20 2003.
Dhirta wareega, oo ay maxkamaddu joojisay, ayaa dib loo hawlgeliyay 1 Agoosto 2007 iyada oo la siinayo Ç EIA Consent Report yönetmelik kadib isbadalka sharci ee ay sameysay Wasaaradda Deegaanka iyo Dhirta. Ururka Samsun Bar, Ankara 10. Maxakamadda Maamulka ayaa dib u furtay kiiska, kiiska ayaa la soo gabagabeeyey bishii Janaayo 22 2008, 16 Febraayo 2008 warshaddii awoodaha mar labaad ayaa gooysay wareeggii.
Markan Ankara 10. Rafcaanka ka dhanka ah go'aanka Maxkamadda Maamulka in lagu durdurma in la joojiyo dilalka ay fulinayaan shirkadaha ay quseyso iyo maxkamadda sare ee Wasaaradda Deegaanka iyo Dhirta waxaa aqbalay Maxkamadda Maamulka Gobolka Ankara iyo 10. Go'aanka maxkamadda maamulka ee lagu joojinayo fulinta pendlmış ayaa la joojiyay bishii Maarso ee 2008 iyo dhirta awoodda guur guura ay bilaabeen inay mar kale shaqeeyaan.
In kasta oo howshani ay socoto, maxkamadda maaraynta ee ururka 'Samsun Administrative Court' waxay furtay "baajinta wiilka liisanka ganacsigu dartiis kiiska, maxkamadda maamulka ayaa la kansalay furitaanka shirkadaha ganacsiga, degmada Samsun ee Magaalo-weynaha ayaa la xiray.
Dadka reer Istanbul, ururada aan dawliga ahayn iyo qolalka xirfadleyda ah ee Samsun toban sano ka hor, sida loo soo qaato tusaalaha halganka iyo warshadda biyaha saboolka ah ee Istanbul ayaa la filayaa inay ku shaqeeyaan si xiiso leh.
Ogeysiis Qandaraasle ah: Xarunta Awoodda Telefoonada ee Telefoonka ah ayaa la Gadanayaa (TÜLOMSAŞ)
Tallaabada Medipol ee ay ka qaadaan Ururada Xirfadleyda “kama aamusi doonno boobkan”
Inta lagu jiro gaaritaanka Kangal Thermal Sold ayaa leh TÜDEMSAŞ
Xirmooyinka Korontada Korontada ee 3orth Bari ayaa mar kale ka tagay EIA
Mashruuca Tareenka Dhabarka ee Dunida ee Dunida laga bilaabo Seattle
Imtixaanka tijaabada tareenka laga keeno Shiinaha ayaa bilaabi doona
The 'Music Ban' ee Ankara Metro in mudada Melih Gökçek
Maxay Tilmaamaha Cusub ee Lagu Caawin Karo Gaadiidka Gawaarida ah Maxaa Loogu Sameeyey Qeybta Caqlicelinta?
Hantidhawrka Vineyard Reacted Road Ring
Black Sea Holding
warshad korontada kulul
YHTs ayaa ilaa hadda waxa ay qaadeen rakaabkii 32 million
3. Miyaynu u duulaynaa rakaabkii madaarka?